Ministeran’ny tontolo iainana Mpiasa ECD miisa 223 nandray ny karamany telo volana
Vente en Ligne Niditra an-tsehatra ihany koa i Baolai
Maro ireo orinasa lehibe eo amin'ny sehatra tsy miankina eto amintsika, no miezaka ny manohy hatrany ny asany araka izay azony
Famokarana herinaratra ao Andekaleka Nanome 11,4 tapitrisa euros ny BEI
Mitohy hatrany ny famatsian’ny avy eo anivon’ny banky eoropeanina momba ny famatsiam-bola na BEI
SPAT Port Toamasina Navaozina ilay trano lehibe fitahirizana varimbazaha
Anisan'ny fotodrafitrasa iandraiketan’ny orinasam-panjakana mahaleotena mitantana ny seranan-tsambon’i Toamasina na SPAT Port Toamasina ny fanarenana ny trano lehibe (SILO) fitahirizana varimbazaha sy ny potika soja, ilaina amin’ny sakafom-biby.
Kobalta Nihen-danja ny sandany
Ny fanondranana kobalta dia very 53.3% amin` ny sandany tamin'ny taona 2019, araka ny tatitry ny banky foibe. Niala tamin'ny 160.1 tapitrisa DTS tamin'ny taona 2018 ka hatramin'ny 74.8 tapitrisa tamin'ny taona 2019.
Fampindramam-bola “Miarina” Orinasa 135 nisitraka 6 miliara ariary
Orinasa 135 no efa nisitraka ny fampindramam-bola “Miarina” napetraky ny fanjakana hoenti-manavotra ireo orinasa.
Fanodinkodinana famatsiam-bola Nomelohin’ny banky iraisam-pirenena
Miisa 22 ireo firenena tena mila ny fanampiana avy amin’ny banky iraisam-pirenena, raha tsiahivina ny tatitra avy amin’ity rafitra ity ny volana febroary teo.
Jono an-dranomasina Fitaovana voarara maro sarona tany Nosy-Be
Fitaovana maromaro ahitana tavoahangy misy ôksizena sy fitaovam-panjonoana ary kojakoja fitondra misitrika anaty rano lalina no saron’ny mpanaramaso ny jono tany amin’ny fari-dranomasin’i Nosy-Be, Faritra DIANA.
Tontosa omaly 22 aprily tetsy Antsahavola ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa ECD miisa 223 eo anivon’ny Ministeran’ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Karama telo volana (Janoary, Febroary, Martsa) no noraisin’izy ireo.
Nozaraina tampim-bava ihany koa ireo mpiasa. Tato anatin’ny taona maro izao dia sambany no nivoaka aloha tahaka izao ny karaman’ny ECD eo anivon’ity Ministera ity. Tonga nihaona tamin'ireo mpiara-miasa aminy handray ny karamany ireo ny Minisitra Vahinala Raharinirina no sady mbola nizara atody 10 isan’olona ho an’ireto ECD ireto ; atody izay tolo-tanana avy amin’ny olona tsara sitrapo. Nambaran-dRamatoa minisitra tamin’izany fa tsy ataony ambanin-javatra ny fikarakarany ny mpiara-miasa aminy eo anivon’ny Ministera ka antony nahafahana namoaka aloha ny karaman’izy ireo. Nampahatsiahiviny ihany koa fa raha misy ny olana eo amin’ny mpiara-miasa tsy ankanavaka dia vonona ny hifampidinika hatrany izy ary mivoha ho an’ny rehetra ny varavarany. Nankasitraka izao fandraisana andraikitra izao ireo ECD nandray karama ireo ary vonona hatrany hifanome tanana amin’dRamatoa Ministra.